အလက်ဇန်းဒါး Verbeek - သမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အနေအထား - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
အလက်ဇန်းဒါး Verbeek အင်တာဗျူး
ငါစတော့ဟုမ်းအတွက်ဒတ်ခ်ျသံရုံးမှာဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာနွေဦးတွင်အလက်ဇန်းဒါးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားမပျက်စီးကျွမ်းကျင်သူများနှင့်စိတ်ကူးမီးစက်အဆိုပါ 17 စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေတဲ့သံတမန်ရေးရာ Hackathon မှာငယ်ရွယ်သင်တန်းသားများကိုရှေ့ဆက်ထားရန်စိန်ခေါ်မှုများဘယ်လိုအံအတူတကွတယ်။ ငါကအခြားဖြစ်ရပ်များမှာနောက်တဖန်နောက်မှသူ့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့သူပြောပြရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇာတ်လမ်းရှိပါတယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ထိုမင်းသည်ဆက်ဆက်မ! အတိတ် 25 နှစ်ပေါင်းအလက်ဇန်းဒါး, ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်, နယ်သာလန်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ရေ, အစားအစာ, စွမ်းအင်နှင့်သယံဇာတအရင်းအမြစ်များ။ သူသည်ယခုစီမံကိန်းများနှင့်အစပျိုးတဲ့ကျယ်ပြန့်ပေါ်တွင်လွတ်လပ်သောအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
အလက်ဇန်းဒါး Verbeek ©
အလက်ဇန်းဒါးမင်္ဂလာပါ! ဒါကြောင့်ဘယ်လိုယခုသင်တို့ရှိရာရခဲ့ဘူး, ငါ့ကိုပြောပြပါ? ဒါဟာတာရှည်ခရီးပဲ! အကြှနျုပျ၏နောက်ခံလုံခြုံရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စများ၌ရှိကြ၏။ ငါဒတ်ခ်ျရေတပ်အတွက်အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်, ပြီးတော့တစ်ဦးသံတမန်အဖြစ်, ငါကို (လှစ်ထား၏) လုံခြုံရေးဦးစီးဌာနများတွင်နှစ်ကြိမ်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့် OSCE မှာဗီယင်နာ (ဥရောပလုံခြုံရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့) တွင်။ အခြားဘက်ခြမ်းတွင်ငါနေတဲ့လူ့ပထဝီဖြစ်ကြောင်းကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စများအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်ယခုတွင်ငါသည်ကွဲပြားခြားနားသောရေရှည်တည်တံ့ရေးနှင့်ရေစီမံကိန်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်၏။ နှစ်ပေါင်းများစွာကဤနှစ်ခုကိုမတူညီတဲ့နောက်ခံခဲချိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ သံတမန်လောကရှိ, လုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူများကပုံမှန်အားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ပါဘူး။ သို့သော်ကိစ္စများကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပို. ပို. လူစည်ကားဂြိုဟ်ပေါ်တွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများပြောင်းလဲပစ်ရန်စတင်ဖြစ်ကြောင်းယခုထက်ပိုသောအပြန်အလှန်ဆက်နွယ်ရတဲ့နေကြသည်။ ဒီတော့ငါ့အနှစ်ခုကိုမတူညီတဲ့နောက်ခံယခုချိတ်ဆက်တဲ့နေကြသည်; ဒါကြောင့်အားလုံးအတူတကွကြွလာ။
သင်လှစ်ထားမှာလုံခြုံရေးနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသင်ပိုမိုစစ်တပ်လုံခြုံရေးတူသောဆိုလိုပါသလော အဘယ်သူမျှမ, လုံခြုံရေးပဲစစ်တပ်လုံခြုံရေးထက်ပိုပါတယ်။ အဘယ်သို့ငါဆိုလိုတစ်ဦးချင်း၏လူသားလုံခြုံရေးကနေငါနှစ်ဦးစလုံးရှုထောင့်အပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီနိုင်ငံများအကြားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကိစ္စများမှတပြင်လုံးကိုအကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်အဆုံး၌တူညီသောအရာရှိသမျှတို့ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ များစွာသောလူလူသားလုံခြုံရေးနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုရှိပါက၎င်းသည်ဒေသတွင်းပဋိပက္ခနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ပင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကိစ္စကိုသို့တိုးတက်နိုင်ဘူး။
ထိုအ Planetary လုံခြုံရေးနှင့်အတူသင်သည်အဘယ်အရာကိုဆိုလိုပါသနည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ဂြိုလ်ဒါလျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ် - ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု, ရေမရှိခြင်း, အစားအစာလုံခြုံရေးပြဿနာများ, စွမ်းအင်နှင့်အရင်းအမြစ်များမှဝင်ရောက်ခွင့်များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှု။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုလုံခြုံရေးတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အစားအစာစျေးနှုန်းများတစ်အချို့တံခါးခုံအထက်တိုးမြှင့်အခါသင်ဥပမာ, သိသိသာသာမငြိမ်သက်မှုများတွင်မြင့်တက်, အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်တော်လှန်ရေးတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမာတစျခုဆီးရီးယားဖြစ်ပါသည်အဘယ်မှာရှိရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနီးပါးတစ်ဆယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းစတင်ခဲ့သောခြွင်းချက်ရှည်လျားမိုးခေါင်များအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာမြို့ကြီးများကျော်သန်းဆီးရီးယားလယ်သမားများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုနှင်။ 2010 အတွက်စားနပ်ရိက္ခာစျေးနှုန်းတွေတက်သွားလေ၏အခါ, သူတို့ကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အမပါဘဲနှင့်ဝင်ငွေမပါဘဲအဲဒီမှာနေထိုင်နေခဲ့ကြသည်။ ခဏမှာသိသာသည်အခြားအကြောင်းရင်းများနှင့်အတူပေါင်းစပ်, ထိုဖြစ်ရပ်တော်လှန်ရေးဖြစ်စေခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျနော်တို့နိုင်ငံများ၌နှိုင်းယှဉ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခြေအနေများအနီးအနားမှာအကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခသို့ဖြစ်ပေါ်မသတိထားမိဖြစ်သင့်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုစစ်မှအလိုအလျှောက်ဦးဆောင်သည်ဟုမပြောနိုင်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူကမကြာခဏခြိမ်းခြောက်မြှောက်ကိန်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ မူဝါဒချမှတ်သူများ ပို. ပို. ပဋိပက္ခများကိုမီးပွားချရန်အဖွဲ့ပေါ်ထွက်လာဖြစ်လာဘယ်လိုဂြိုဟ်အပြောင်းအလဲများကိုနားလည်ရန်အဘို့အထို့ကြောင့်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအသင်မည်သို့နယ်သာလန်နိုင်ငံစည်းရုံးရေးစတင်သောနှစ်ပတ်လည် Planetary လုံခြုံရေးကွန်ဖရကောအသို့နည်း အဆိုပါ Planetary လုံခြုံရေးညီလာခံနှစ်ခုရည်မှန်းချက်များဆောင်ရွက်ပါသည်။ တဦးတည်းကဒီရာသီဥတု-လုံခြုံရေးဆကျဆံရေးအပျေါကမ်ဘာပျေါမှာအကောင်းဆုံးကျွမ်းကျင်သူများကထိုလူအပေါင်းတို့သည်တစ်ချိန်ကတစ်နှစ်တွေ့ဆုံရန်နိုင်မည့်တဦးတည်းနေရာရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကကွန်ရက်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်နှင့်အသစ်အစပျိုးဖွံ့ဖြိုး, သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်သုတေသနဖလှယ်။ အဆိုပါယုတ္တိရွေးချယ်မှုအဆိုပါဟိဂ်၌ဤလုပ်ဖို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေများ၏မြို့ဖြစ်၏ကျနော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးနန်းတော်၏သင့်လျော်သော setting ကိုအတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
အခြားရည်မှန်းချက်သည်ဤအထူးကုများ၏ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြင့်မူဝါဒချမှတ်သူများနှင့်အတူမျှဝေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်လစီချမှတ်သူများကြှနျုပျတို့သညျဤစကေးမှာတစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးဘူးသောထိုအသစ်ကို '' ဂြိုဟ် '' နိုင်ငံရေးနှင့်လုံခြုံရေးစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ Planetary လုံခြုံရေးညီလာခံမှာကျနော်တို့ကဂြိုဟ်နယ်နိမိတ်နှင့်ပထဝီနိုင်ငံရေးအကြား interrelationship အကြောင်းကိုအသိအမြင်ကိုတည်ဆောက်စေ။ ထိုသို့လုံခြုံရေးနှင့်အတူသာလုပ်ဖို့မရှိပါ။ ဒါဟာကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ, ပညာရေး, တန်းတူရေးဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ "ဟုတ်ကဲ့, အိုးသည်ရာသီဥတုကျွမ်းကျင်သူများကစကားပြော!" သူတို့ကဤသူအပေါင်းတို့ကိစ္စရပ်များနှင့်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိသင့် - ငါတို့သည်သင်တို့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်. သူတို့အဖို့စကားပြောသည့်အခါသူတို့ဆို, များစွာသောနိုင်ငံရေးသမားများ, ပင်သတင်းထောက်များနှင့်မူဝါဒချမှတ်သူများတို့တွင်တုံ့ပြန်မှုကိုမြင်လျှင်ကိုရပ်တန့်သင့်တယ် သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်ခံနိုင်ရည်အားကောင်းလာစေရန်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနားလည်ပါသည်။
ငါစားရှာဖွေသူဖြစ်လိုခြင်းနှင့်ငါဂျိမ်းစ်ကွတ်, Shackleton သို့မဟုတ်ဟီလာရီ၏ Adventures အပေါ်ရှာတွေ့နိုင်ကြောင်းအရာအားလုံးကိုဖတ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ကိုသင်တို့အားယခုပြန်သွားကြကုန်အံ့။ သင်အနည်းငယ်ကောင်လေးသောအခါဖြစ်လာမှဘာကိုလိုချင်တာခဲ့တာလဲ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကို။ အစဉ်မပြတ်ငါကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတစ်ခုခု, နယ်လှည့်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ခဲ့ကြောင်းတစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသိသည်။ ငါငါးအခါကျွန်မလေယာဉ်မှူးဖြစ်လိုတိုင်းကလေးလေးလိုပဲထင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကျွန်မအနေနဲ့ရှာဖွေသူဖြစ်လိုခြင်းနှင့်ငါဂျိမ်းစ်ကွတ်, Shackleton သို့မဟုတ်ဟီလာရီ၏ Adventures အပေါ်ရှာတွေ့နိုင်ကြောင်းအရာအားလုံးကိုဖတ်ပါ။ ဒါဟာလူ့ပထဝီဝင်လေ့လာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှဦးဆောင်ခြင်းနှင့်ငါလုပ်အားစျေးကွက်၏ mobility အပေါ်အင်ဒိုနီးရှားမှာရှိတဲ့မြို့ငယ်လေးတစ်သုတေသနလုပ်နေတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်အဘယျသို့သောနောက်ဖွစျခဲ့သလဲ ကျွန်မတက္ကသိုလ်ကနေဘွဲ့ရပြီးနောက်ကျနော့်သတင်းစာဆရာအဖြစ်တစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်ဒတ်ခ်ျရေတပ်အတွက်အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါရေတပ်နယ်သာလန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်းဒါချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါရေပေါ်မှာဖြစ်ကိုချစ်အများအပြား Dutchmen ကဲ့သို့ပင်, ငါရွက်ကိုချစ်! ထိုအခါငါ Unilever အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်းဖွင့်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ငါ၏ကျောင်းသားရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်းသေးငယ်တဲ့ပုံနှိပ်ခြင်းကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြောင်းနှင့်ငါရေတပ်၌ရှိ၏စဉ်အချို့စီးပွားရေးကိုလေ့လာမိသောကြောင့်သူတို့ဖြစ်ကောင်းငါ့ကိုစုဆောင်း။ ငါ Unilever မှာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးတာဝန် Timotei ခေါင်းလျှော်ရည်များအတွက်စျေးကွက်ဖြစ်သွားခဲ့ကွောငျးသတိရပါ။ ဒါပေမယ့်ငါ့အလျှောက်လွှာအောငျမွငျခဲ့ကွောငျးကိုငါသံတမန်ဖြစ်လာမှလျှောက်ထားခဲ့ကြောင်းနှင့်သတင်းလာသောအခါအထိုအချိန်အတောအတွင်း၌ငါသံတမန်ရေးပြောင်းရန်ဖို့နောက်ဆုံးယခုအချိန်တွင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့်သင်ကသံတမန်ဖြစ်လာချင်ခဲ့တာလဲ ဒါဟာငါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတွေ့ရသောအတူတူအရာအားလုံးကိုတတ်၏။ ကမ်ဘာပျေါတှငျအမြားဆုံးရှုပ်ထွေးပြဿနာများ၏အခြို့သောသံတမန်ရေးပြဿနာများဖြစ်ကြသည်။ ငါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၏စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ရှုပ်ထွေးရှာပါ။ အတူတကွအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်လိုက်လျောတွေ့ရှိရန်ရှိသည်သောကွဲပြားခြားနားသောနောက်ခံနှင့်အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏လူ့အချက်အမြဲစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ လောကဓာတ်လုံးကိုသင့်လုပ်ငန်းခွင်ပါ! စီးပွားရေး, ယဉ်ကျေးမှု, ပတ်ဝန်းကျင်, လုံခြုံရေး, လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ - ထိုအခါသင်တို့အပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နိုင်ကိစ္စများ၏ထိုကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်ရှိပါတယ်။ ငါသည်ငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအများစုသောကွောငျ့ကြှနျတေျာ့နောက်ခံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်းမျှော်မှန်းထားသည်။ သို့သော်ရေတပ်အရာရှိအဖြစ်ငါ၏အတှေ့အကွုံမြားလုံခွုံရေး၏အခြားဘက်ခြမ်းမှပထမဦးဆုံးငါ့ကိုဆွဲငင်နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်မလုံခြုံရေး, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အကြား link ကို ပို. ပို. အာရုံစူးစိုက်။
ဒါဟာနေဆဲငါ့အဘို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပါ! ငါသံတမန်အဖြစ်သင်အမှန်တကယ်ဤလောက၏ပိုကောင်းတဲ့နေရာအရပ်အောင်အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ဒီစိတ်ကူးရှိသည်။ ကျွန်မသင်ယူဖို့ဆက်လက်ယခုငါပိုပြီးလွတ်လပ်စွာအလုပ်လုပ်သော, ငါသည် think-င့်ကားများသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များကနေအများအပြားသရုပ်ဆောင်များကိုအကြား interrelationships ကြည့်ပါ။
ဒီကမ္ဘာကြီးကိုပိုကောင်းတဲ့နေရာအရပ်ဖြစ်စေ, သင့်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း ဟုတ်ပါတယ်, အစဉ်မပြတ်ငါငါအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြအရာအားလုံးများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုကြောင့်ရှိခဲ့တယ်။
သင်ကရရှိ၏လမ်းပေါ်မှာခံစားရပါသလား? ငါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုအကြောင်းပိုမိုအသိအမြင်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းမှလှူဒါန်းခဲ့ကြပါပြီအခြားလူသန်းပေါင်းများစွာနဲ့အတူတူပြောနိုင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ငါမှော်ဖြေရှင်းချက်အချို့ကြင်နာခဲ့ဆန္ဒရှိပေမယ့်ငါမကျင့်။ ဒီဖြေရှင်းချက်ကြှနျုပျတို့ပွုဖို့ရှိသည်နည်းနည်းအရာသန်းပေါင်းများစွာ၏စုစုပေါင်းအင်အားမှာတွေ့ရှိခံရဖို့ရှိပါတယ်။ အတော်များများကထိုကဲ့သို့သောဝေးအားလပ်ရက် destination သို့ပျံသန်းမယ့်အနည်းငယ်သာခြေလှမ်းများဖြစ်ကြသည်, ဒါမှမဟုတ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအသားစားသုံးခြင်းကိုရပ်တန့်။ သို့သော်ကြီးမားသောဖြေရှင်းချက်ကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောလျှင်မြန်စွာစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အဖြစ်ကျောက်မီးသွေးကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရတဲ့နှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲသို့ရွေ့လျားအပေါ်အစိုးရအဆင့်အထိဆုံးဖြတ်ချက်များအဖြစ်လိုအပ်နေပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်တွင်ကျနော်တို့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုထိခိုက်မှုအများအပြားစိုးရိမ်စရာအချက်ပြမြင်ကြပြီ, ဒါပေမယ့်ငါတို့သည်လည်းအင်အားသုံးသို့၎င်း၏လျင်မြန် entry ကိုအပါအဝင်ထိုကဲ့သို့သောပဲရစ်သဘောတူညီချက်အဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက်မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု, မြင်ကြပြီ။
ဒါနဲ့အောင်မြင်သောခဲ့သလဲ ငါ Planetary လုံခြုံရေးအပေါ်အတူတကွကွဲပြားခြားနားသောသရုပ်ဆောင်များကိုဆောင်ခဲ့၌ဤကြီးမားပဟေဠိတစ်ခုအလွန်သေးငယ်သောအပိုင်းအစတောင်းခံနိုင်သည်ဟုဆိုထားသည်ပုံပါဘဲ။ ထိုအခါငါကပိုအသိအမြင်ကိုအာရုံစိုက်ပါ။ ဒီခေါင်းစဉ်အကြောင်းပြောဆိုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစီမံကိန်းများနှင့်အတော်ကြာအကြံပေးအဖွဲ့ပျဉ်ပြားများတွင်တက်ကြွစွာဖြစ်၏။ ငါဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်လည်းတက်ကြွစွာဖြစ်၏။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါ၏အတွိတစ်လလျှင်အချို့2လူဦးရေသန်းရောက်ရှိရန်။ အကြှနျုပျ၏အများပြည်သူစကားပြောလည်းငါထင်, ကူညီပေးသည်။ အတိတ်ကာလတဝက်တစ်နှစ်, ငါသည်ဟောင်ကောင်, အရီဇိုးနား, New York နဲ့ Paris နဲ့တူသောနေရာများအတွက်မိန့်မြွက်တော်မူ၏။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကငါ Marrakech နှင့်ရိုတာဒမ်၌ဟောပြောပါလိမ့်မယ်လာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်း, ယူနက်စကို-IHE မှာစကားပြောနှင့် Imperial College London ကသင်ကြားပေးခဲ့သည်။
သင်တို့သည်လည်းတစ်ခုအောင်မြင်မှုကြောင်းပေါက်ကွဲဗုံးများအတွက်ကုလသမဂ္ဂ၏ဥပဒေ, ရေးဖို့ကူညီပေးခဲ့သည်! သင်ပိုမိုငါ့ကိုပြောပြနိုင်မလား? တချို့က 15 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအန်ဂျီအို၏တက်ကြွမိုင်းအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအသိုင်းအဝိုင်းအကူအညီ-ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်သံတမန်များအများအပြား '' မြေမြှုပ်မိုင်း-သားကောင်များ '' မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဗုံးအမှန်တကယ်သားကောင်များဖြစ်ကြောင်း ပို. ပို. သတိထားမိဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားလက်နက်များမြေမြှုပ်မိုင်းများကဲ့သို့လူ့ဘဝအပေါ်တူညီတဲ့အကြီးအကျယ်သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပေမယ့်ကျနော်တို့အဲဒီအခြိနျမှာရှိခဲ့သောကွဲပြားခြားနားသောမြေမြှုပ်မိုင်းစာချုပ်များမဆို၏အစိတ်အပိုင်းကြဘူး။ အိုင်စီအာစီ (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီနှင့်လခြမ်းနီ) ကြှနျုပျတို့အားလုံး '' စစ်ပွဲ၏ Explosive အကြွင်းအကျန် '' နှင့် ပတ်သက်. စည်းဝေးကြီးလုပ်သင့်ကြောင်းအဆိုပြုခဲ့သည်။ ငါစိန်ခေါ်မှုအပေါ်ကို ယူ. တစ်ဦးပထမဦးဆုံးမူကြမ်းစည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုရေးသားခဲ့သည်။ ထိုအခါငါပထမဦးဆုံးကျွမ်းကျင်သူများ၏သေးငယ်တဲ့စက်ဝိုင်းနှင့် ပို. ပို. ပိုကြီးတဲ့အုပ်စု, ဒီဗားရှင်းတိုးတက်လာဖို့အစည်းအဝေးများစုစည်းဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ ဂျီနီဗာနှင့် The ဟိဂ်၌ငါ၏ဒတျချြလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောသမားရိုးကျလက်နက်များကွန်ဗင်းရှင်းဖို့နောက်ထပ် protocol ကိုပေါ်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုစတင်ရန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ရရှိရန်နိုင်ခဲ့သည်။ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု၏နှစ်များစွာကြာပြီးတဲ့အခါမှာကျနော်တို့စစ်ပွဲ၏ Explosive အကျန်အကြွင်းပေါ်သစ်ကိုပရိုတိုကောပေါ်မှာဤစည်းဝေးကြီးတစ်ပါတီရှိသမြှသောနိုင်ငံများအကြားသဘောတူညီမှုရောက်ရှိခဲ့သည်။
သငျသညျယခုအဘယ်အရာကိုအလုပ်လုပ်သလဲ? ငါ Planetary လုံခြုံရေးများအတွက် Institute မှဖွင့် setting များနှင့်အများအပြားညီလာခံစည်းရုံးရေးအပါအဝင်စီမံကိန်းများကိုများစွာပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ကျွန်မအပေါ်အလုပ်လုပ်သောနောက်ထပ်စီမံကိန်းတစ်ခု '' ရေရှည်တည်တံ့စတော့ဟုမ်း '' ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသော SEI နှင့် Siwi နှစ်ဦးစလုံးမှာတွဲဘက်အဖြစ်ကိုငါ့အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံသည်။ ရေရှည်တည်တံ့စတော့ဟုမ်း - ငါတဦးတည်းအမှတ်တံဆိပ်ဖန်တီးဖို့အတူတကွအပေါင်းတို့, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာပု think-တင့်ကားများကဲ့သို့ကစားသမား, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အစိုးရထံသို့ဆောင်ခဲ့ချင်တယ်။ ဒါဟာစတော့ဟုမ်း, အတွေးအခေါ်များကိုထုတ်ပေးပါလိမ့်မည်နှင့်ညွှန့်ပေါင်းဖွဲ့စည်းထားပါလိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်တစ်မူထူးခြားတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများစုစည်း, မှတ်မိမျက်နှာဖြစ်သင့်သည်။ အဆိုပါအယူအဆဖြစ်ပါသည်: "ကမ္ဘာဂြိုဟ်များအတွက်ဖြေရှင်းချက်ကိုရှာဖွေဤမြို့ကိုကိုသွားပါ!" သှားဖို့ပထမနေရာ, သင်ကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံး Think Tank အဖွဲ့အချို့ကိုရှာဖွေရှိရာရေရှည်တည်တံ့ရေး၏လယ်ပြင်ထဲမှာဘာမှတည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင်, တစ်ဦး ထောက်ခံအစိုးရနှင့်တစ်ဦးဆန်းသစ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသိုင်းအဝိုင်းက။ ဒါကအနုပညာမြင်ကွင်းကိုလည်း concept ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အဖြစ်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေသောနည်းပညာဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်နဲ့တူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအန္တရာယ်များအကြောင်းကိုအသိပညာပေးပြုစုပျိုးထောင်အတွက်နှစ်ဦးစလုံး, ကစားရန်အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုရှိရာတဦးတည်းအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သင့်သည်။
ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်လိုသူလူငယ်တစ်စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်လူတို့အဘို့မဆိုအကွံဉာဏျ? လုပ်သာလုပ်! ယခုပညာရေးပြီးဆုံးသောမျိုးဆက်သစ်လူသားထု၏သမိုင်းတစ်မူထူးခြားတဲ့အနေအထား၌တည်ရှိ၏။ သူတို့ရှေ့မှာအဘယ်သူမျှမမျိုးဆက်အစဉ်အဆက်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်သောကြီးကျယ်သောအန္တရာယ်ကနေကမ္ဘာကြီးကိုချွေတာတွေနဲ့တာဝန်ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သူတို့ပျက်ကွက်လျှင်အားဖြင့်ငါတို့သည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကယ်ဖို့ဆက်ဆက်သိပ်နောက်ကျပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သူတို့နောက်သို့အဘယ်သူမျှမမျိုးဆက်, ထိုကဲ့သို့သောအခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်။ လူငယ်တွေကကျနော်တို့ရင်ဆိုင်ရသောစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေများအတွက်ဖြေရှင်းချက်ကိုရှာဖွေအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်ကျွမ်းကျင်မှုသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
wow အိုးကြောင်းလူငယ်များအဘို့ထမ်းတစ်ဦးကြီးတွေဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးပါ! သူတို့ပထမဦးဆုံးအဘယ်အရာကိုအာရုံစိုက်သင့်သလဲ ပထမဦးဆုံးနှင့်အဓိကမေးခွန်းတစ်ခုကိုကမ္ဘာ့လေထုကနေဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကိုဖယ်ရှားမယ့်လုပ်ကိုင်နိုင်သောဖြေရှင်းချက်ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်ပါသည်။ အကြှနျုပျ၏မျိုးဆက်လာမည့်မျိုးဆက်တစ်နည်းနည်းနဲ့လေထုထဲက CO2 ရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်အတွက်သိပ်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာကိုမီးမရှို့ဖို့ရောက်နေပါတယ်။ ဒါဟာနည်းနည်းလေယာဉ်မှူးကျနော်တို့သေးလေယာဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဒီဇိုင်းအချိန်မခဲ့သောကွောငျ့ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်လူငယ်များဆင်းသက်ဂီယာဒီဇိုင်းဖို့တောင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြသည့်အခါတစ်ဦးလေယာဉ်အတွက်ကိုချွတ်ယူပြီးနဲ့တူပါ! ဒါပေမဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေအများကြီးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အပေါ်ကိုဖန်ဆင်းတိုးတက်မှုကိုကြည့်လျက်ရှိ၏။ ငါရေရှည်အမြတ်အစွန်းတိုးပွားလာနှင့်အတူ၎င်းတို့၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ခြေရာတစ်ခုလျှော့ချရေးပေါင်းစပ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲကြောင်း Unilever နဲ့တူကုမ္ပဏီများကဆန်းသစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းချဉ်းကပ်စိတ်ဝင်စားတယ်နေပါတယ်။ ငါအနာဂတျအတှကျမြျှောလငျ့ခများဒါဒီမှာစတော့ဟုမ်းအတွက်ဖြည့်ဆည်းသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုအရမ်းလေးစားမိပါတယ်!
သငျသညျ Twitter ပေါ်တွင်အလက်ဇန်းဒါးကိုလိုက်နာဖို့လိုပါလျှင်သင်တို့သည်ဤမျှအပေါ်လုပျနိုငျ @Alex_Verbeek.
အဲလက်စ် Verbeek အပေါ်အကြောင်းကိုပိုမိုရှာပါ Instagram ကို နှင့် AlexVerbeek.net
အလက်ဇန်းဒါး Verbeek, သံတမန်, Eco, Ekaterina Larsson, စိတ်ကူးများ, နယ်သာလန်, လူ, စတော့ဟုမ်း, ခရီးသွား | 30-11-2016 | rating:5/ 30